Ukuthuthukisa Izinga Ngokokuthola Insindiso kaNkulunkulu | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ukuthuthukisa izinga labantu kudinga ukuba nithuthukise amakhono enu okwamukela. Isidingo esiyisisekelo kinina ukuba namukele ngokucacile amazwi akhulunywe kinina. Ngabe akusiyo inkolo exovekile uma nilandela Mina ngaphandle kokuqonda engikushoyo? Izinga lenu liphansi kakhulu. Kungenxa yokuba aninawo amakhono okwamukela ukuthi aniqondisisi nakancane lokhu okushiwoyo. Ngakho-ke, kunzima ukufeza imiphumela efiswayo. Izinto eziningi azikwazi ukushiwo ngokuqondile kinina futhi umphumela osekuqaleni ngeke uzuzwe. Ngakho-ke, imisebenzi eyengeziwe kufanele ifakwe emsebenzini Wami. Kuyadingeka ukuthi kuqalwe lo msebenzi “wokuphakanyiswa kwezinga labantu” phakathi kwenu ngoba amakhono enu okwamukela, amakhono okubona izinto, namazinga ezimpilo zenu aphansi kakhulu. Iyona ndlela le edingekayo, ayikho enye indlela, futhi kumele kwenziwe ngale ndlela ukuze ingxenye yemiphumela izuzwe. Kungenjalo, wonke amazwi engiwashoyo azoba yize, nokuthi nikhunjulwe emlandweni njengezoni? Ningebe abakhohlakaleyo? Uyini lo msebenzi owenziwa kinina? Yini edingeka kinina? Ngabe anazi? Kumele nilazi izinga lenu, alikwazi ukufinyelela kulokho engikudingayo nhlobo. Ingabe lokhu akubambezeli umsebenzi? Ngaleli zinga lenu nesimilo, akekho noyedwa kinina ofanele ukufakaza Ngami, futhi akekho noyedwa ongakwazi nongakumela ukuthwala umthwalo onzima womsebenzi Wami wesikhathi esizayo. Anizizwa ninamahloni kakhulu ngalokhu? Ziyoneliswa kanjani zonke izifiso Zami uma lokhu kusaqhubeka? Kufanele wenze impilo yakho igcwale futhi ibe nenzuzo. Ungavumeli isikhathi sidlule ngeze. Akukho ukubaluleka ekwenzeni kanjalo. Kufanele wazi ukuthi yiziphi izinto okufanele uhlome ngazo. Ungacabangi ukuthi wazi zonke izinto. Hhayi nakancane nje! Yini okumele kukhulunywe ngayo uma ungenalo noluncane ulwazi ngobuntu? Bekungeke yini konke kube yize? Akekho noyedwa phakathi kwenu oqeqeshiwe ngokuphelele ngokwezinto engizidingayo ngokwezinga lomuntu. Kunzima ukuthola umuntu ofanelekile ukusetshenziswa. Nikholwa ukuthi ningabantu abangakwazi ukungenzela umsebenzi omkhulu futhi nithole ukwethembeka okukhulu Kimina. Eqinisweni, anazi nokuthi ningangena kanjani ezimfundisweni eziningi ezingaphambili kwenu, ngakho kungenzeka kanjani ukuba ningene emaqinisweni ajulile? Ukungena kwenu kumele kube nendlela okwenziwa ngayo. Ningakwenzi ngendlela engahlelekile. Lokhu ngeke kube kuhle. Ngena ohlangothini olungajulile—funda la mazwi umugqa nomugqa uze uzuze ukuqonda nokucaciseleka. Umfowethu nodadewethu ngamunye kufanele okungenani bakwazi ukufunda. Ungabheki nje sengathi ubuka izimbali ngenkathi ugabavula ngehhashi futhi ungavele wenze ngokuqeda icala nje. Ngokujwayelekile, ungakwazi ukufunda imisebenzi yokubhekisela (njengezincwadi zolimi noma ezigqugquzelayo). Asikho isidingo sokufunda izincwadi ezikhuthaza ingqondo yenu kakhulu (izincwadi zothando, zocansi, amaphephabhuku, noma izimpilomlando ngamadoda amakhulu), okubangela umonakalo omkhulu kunokuhle. Kumele nazi konke ngokupheleleyo lokhu okumele ningene kukhona nokumele nikuqonde. Inhloso yokuthuthukisa izinga iyodwa, ingukusiza abantu bazazi ngokoqobo, bona uqobo, isikhundla noma ukufaneleka. Kuyini lokhu okusemqoka emabandla angezansi okufanele angene kukho? Ngabe abantu abalikhuphuli izinga labo manje? Kusemqoka kakhulu ukubambelela kulokhu kungena ekufundeni; akumele kudedelwe! Ingxenye eyodwa yalokhu ukuba kufanele niqonde ukuthi kungani izinga labantu kumele lithuthukiswe, lingakhushulwa kanjani izinga, futhi iyiphi ingxenye ezongenwa. Kufanele niqonde incazelo yobuntu obujwayelekile, ukuba kungani lo msebenzi kumele wenziwe, nokuthi kumele uhlelwe kanjani. Lapha ekufundeni, yiziphi izingxenye okufanele zifundwe, nokuthi umuntu angene kanjani? Kufanele nonke nazi ukuthi iyiphi inhloso yokufunda. Akukhona ukuqonda amazwi kaNkulunkulu nokungena eqinisweni? Isiphi isimo esidlangile emabandleni manje? Uma nitshela umuntu ukuthi akafunde, uyakhohlwa ngenjabulo yamazwi kaNkulunkulu. Uma nikhuluma ngobuntu obujwayelekile, banaka kuphela ukuqoqa imizi yabo, ukushanela phansi noma ukupheka, ukuhlanza ikhishi nokuthenga izinto zokupheka. Bakhathalela lezi zinto kuphela bengakwazi ukuphila impilo ejwayelekile yebandla. Kungenjalo babheka amagama kwisichazamazwi futhi bafunde amagama amasha, kodwa bangenzi lutho usuku lonke. Seniphambukile uma nihlala esimweni samanje. Ngakho kungani nicelwa ukuthi ningene empilweni yomoya? Konke enikufundayo yilezi zinto ezingeke zinisize ekuzuzeni lokho okudingeka kinina. Okusemqoka kakhulu impilo yokungena. Isizathu sokwenza lokhu ukuxazulula izinkinga abantu ababhekana nazo. Ukuphakamisa izinga kukuvumela ukuba wazi imvelo yomuntu nokoqobo komuntu—inhlosongqangi yokwazi lezi zinto ukuba impilo yomoya yabantu ikhule nesimo sabo siguquke. Ningakwazi ukugqoka kahle futhi nibukeke kahle; ningase nibe nokuqondisisa kanye nobuhlakani, kepha ekugcineni, uma kufika usuku lokuba niye emsebenzini, anikwazi ukwenza lokho. Kufanele nazi-ke, okufanele ngabe niyakwenza futhi ngesikhathi niphakamisa izinga lenu. Ukuguqula wena kungumgomo. Ukuphakamisa izinga kuyisengezo. Ngeke kwenzeke uma izinga lakho lingathuthukisiwe. Kubi kakhulu uma isimo sakho ngokwemvelo singakwazi ukuguqulwa. Okunye ngaphandle kokunye ngeke kwanele. Ukuba nobuntu obujwayelekile akuchazi ukuthi uthwale ubufakazi obunzima. Okudingekayo kinina akulula kakhulu.
Uma izinga lomuntu selithuthuke ngangokuthi abe nomqondo kanye nendlela yokuphila ejwayelekile yobuntu futhi abe nendlela yokungena empilweni, kulapho kuphela ayokwazi khona ukuguquka futhi afakaze. Uma usuku lokuba ufakazi lufika, kunesidingo sokuba kukhulunywe ngoguquko empilweni yomuntu nangolwazi lukaNkulunkulu ngaphakathi. Inhlanganisela yalezi zingxenye zombili kuphela engubufakazi beqiniso nenzuzo yenu yeqiniso. Ngeke kwenzeke uma uguquko lobuntu lungaphandle kuphela kungenakuqonda ngaphakathi. Ngeke kusize futhi ukuba nokuqonda neqiniso ngaphakathi kodwa unganaki ukuphila impilo ejwayelekile yobuntu. Umsebenzi owenziwe kuwe namhlanje akusiwo owokukhombisa abanye kodwa ukuguqula wena. Kudingeka ukuba unake ukuziguqula wena. Ungabhala futhi ulalele nsukuzonke, kodwa ngeke kusebenze uma ungazibandakanyi nezinye izindawo zempilo yakho. Kumele ube nezindlela zokungena kuzo zonke izingxenye. Kufanele ube nempilo ejwayelekile yomuntu ongcwele. Abaningi odade bagqoka njengabesifazane abacebile nabafowethu bagqoka njengabesilisa abacebile noma amakhosi, balahlekelwe ngokuphelele ukuhlonishwa kwabangcwele. Ingxenye eyodwa ukuphakanyiswa kwezinga lomuntu, okungazuzwa ngenhlanhla. Enye ingxenye ebalulekile kakhulu ukudla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu. Bekungeke kube ukuchithwa kokufunda uma izinga liphakanyisiwe kepha lingasetshenziswanga ngoba ungadlile futhi ungaphuzile amazwi kaNkulunkulu? Izingxenye zombili kumele zihlanganiswe. Kungani ulwazi ngoNkulunkulu lufakwa kule ngxoxo ngalokho okudingekayo kuwena? Ngabe akusikho ngenxa yemiphumela yomsebenzi wesikhathi esizayo? Ngemuva kokuba usunqotshiwe, kufanele ube ngufakazi ngohlangene nakho empilweni yakho. Ngeke kwenzeke uma ingaphandle lakho liyinjwayelo yobuntu kodwa ungakwazi ukukhuluma lokho oke wahlangabezana nakho empilweni yakho ngomlomo wakho. Uma unempilo kamoya ejwayelekile, kufanele uzuze ubuntu obujwayelekile, futhi nezingxenye eziningi zempilo ejwayelekile yobuntu zizokwazi ukufundeka ngokuqondana. Ungasho yini ukuthi ukushanela phansi kudinga ukuqeqeshwa okukhethekile? Uma udinga ihora ukuba uzijwayeze ukubamba ama-chopsticks okudla, lokho akwamukelekile kakhulu! Ubuntu obujwayelekile bubandakanya lezi zingxenye: ukuqonda, ingqondo, unembeza kanye nesimilo. Uma ungazuza okujwayelekile engxenyeni ngayinye kulezi zingxenye, ubuntu bakho busesigabeni esifanele. Kumele ufuze umuntu ojwayelekile futhi uziphathise okokholwayo kuNkulunkulu. Akudingeki ukuthi uzuze okuphezulu kakhulu noma uzibandakanye nenkulumo enokuhlakanipha. Kufanele nje ube umuntu ojwayelekile, onomqondo womuntu ojwayelekile, ukwazi ukubheka izinto, futhi okungenani ubukeke njengomuntu ojwayelekile. Lokhu kuzokwanela. Konke okudingeka kuwena namhlanje kusemandleni akho futhi akukuphoqi ukuthi wenze into engaphezu kwamandla. Akukho magama angenamsebenzi noma umsebenzi ongenamsebenzi ozokwenziwa kuwe. Bonke ububi obukhulunyiwe noma obembuliwe empilweni yakho kufanele bulahlwe. Nikhohlakaliswe uSathane futhi ninobuthi obuningi bukaSathane. Enicelwa khona ukuba nisuse inkohlakalo yesimilo sikaSathane, akusikho okokuba umuntu ophezulu, noma ongusaziwayo noma umuntu omkhulu. Lokhu akunamsebenzi. Umsebenzi owenziwa kinina uvumelana nalokhu okungaphakathi kinina. Kunemikhawulo kulokhu engikudingayo kubantu. Uma abantu banamuhla bonke bebecelwa ukuba baziphathe njengezishoshovu zaseShayina, futhi besebenzisa iphimbo lezishoshovu zaseShayina, baqeqeshiwe ngendlela yokukhuluma yabantu abayizikhulu zikahulumeni eziphezulu, noma abaqeqeshwe endleleni nangephimbo lokukhuluma kwababhali bezincwadi, nalokhu ngeke kulunge. Ngeke kuze kutholakale. Ngokuhambisana nezinga lalaba bantu, kufanele okungenani bakwazi ukukhuluma ngokuhlakanipha futhi ngobuhlakani futhi bachaze izinto ngokucacile. Kuyilapho ke befeza izidingo. Okungenani, ukuqondisisa nomqondo kungatholakala. Njengamanje into esemqoka ukulahla isimilo senkohlakalo kaSathane. Kumele nilahle ububi enibuvezayo. Uma ningakulahlile konke lokhu, ningawuthinta kanjani umqondo osezingeni eliphezulu kanye nokuqondisisa? Abaningi abantu bayabona ukuthi isikhathi sesiguqukile, ngakho abanabo ubuntu noma isineke, futhi kungenzeka ukuthi bangabi nalo uthando noma ukuhlonipheka okungcwele. Laba bantu abangenangqondo kakhulu! Ngabe banalo iconsi lobuntu obujwayelekile? Banabo ubufakazi abangakhuluma ngabo? Abanakho ukuqondisisa nomqondo nhlobo. Kunjalo, ezinye zezingxenye zokwenza kwabantu ziphambukile futhi ziyiphutha elidinga ukulungiswa. Kufana nempilo kamoya yabantu abalukhuni noma ababukeka bengenayo imizwa futhi nobuwula bangaphambilini—zonke lezi zinto kufanele ziguquke. Uguquko aluchazi ukuthi untule ukuzithiba noma uzitike ngokwenyama, usho noma yini oyifunayo. Ukukhuluma ngobudedengu ngeke kulunge! Ukuziphatha njengomuntu ojwayelekile ukukhuluma ngokuzwakalayo. Uyebo uchaza uyebo, ucha uchaza ucha. Qiniseka emaqinisweni futhi ukhulume ngendlela efanele. Ungakhohlisi, ungaqambi amanga. Kumele kwaziwe ukuthi imikhawulo yomuntu ojwayelekile ingafinyelela ekuguquleni isimilo somuntu. Uma lokho kungaziwa ngeke ukwazi ukungena esimweni sokoqobo.
Okulandelayo：Ukubaluleka Kokusindisa Isizukulwana SikaMowabi